Alakụba kpochara mgbe New Year si n'abalị, ma nke a abụghị Islam | Apg29
Amaghị m ma ọ bụrụ na ọ na-ekwu na Koran na Alakụba ga ọcha mgbe Swedish New Afọ abalị , ma ọ bụ mba ọ bụla ọzọ n'ihi na nke ahụ, ma m maara na ọ na-ekwu na ha ga-egbu n'aha Allah na na Muhammad bụ a warlord na ọtụtụ ndị, ọtụtụ ndị nwụrụ anwụ na akọnuche ya.
Na Muslim Saudi Barbary mmadụ 150 e gburu site beheading na 2018. A ga-enwe ihe dị ka 13 beheadings na ọnwa, na a ọnụ ọgụgụ kasị elu na July site 27 decapitations, na ọnụ ọgụgụ kasị elu 7 avhuvningar na a otu ụbọchị.
December 2018 gburu 801 ndị mmadụ na aha nke Allah
Image isi: petterssonsblogg.se.
Na December 2018 gburu 801 ndị mmadụ dị iche iche Muslim iyi ọha egwu na aha Allah.
Mgbe abụọ Scandinavian inyom isi na Morocco afọ gara aga, kwuru na nkịtị mantra "nke a abụghị Islam," ma ọ bụ ndị kwesịrị ntụkwasị obi Alakụba ndị mere ya bụ onye chọrọ ime ihe Allah.
N'ezie ọtụtụ ndị Alakụba na mgbe ihe dị otú ahụ, ma ndị na-na ọ na-eme ya bụ na-emekarị n'ihi na Islam na-akụzi n'ebe ahụ.
aghụghọ ihapu otutu okwu
E nwere ndị na-ekwu na otu kwesịrị ịkpachara anya ka ịkatọ islam iyi ọha egwu n'ihi na ọ dịla n'omume na aha Christianity. Nke a bụ a na-aghọ aghụghọ ihapu otutu okwu, ọ pụta ìhè na-elekwasị anya n'ebe Jizọs Kraịst!
O nweghị mgbe Jizọs kwuru na anyị kwesịrị igbu onye na aha ya. Kama nke ahụ, ọ na-ekwu na Pita na ọ ga-arapara mma-agha azụ n'ime ya n'ọbọ-ya. Nke a bụ ozi nke Jesus.
Ma na Muhammad, ọ bụ ihe dị nnọọ iche. Ọ bụ gburu, gburu onwe ya ma nye iwu na ndị ọzọ ga-eme otu ihe. Anyị ekwesịghị jiri okpukpe nke Islam na Christianity, ma ọ bụ ha na-eso ụzọ ya na onye ọ bụla ọzọ.
Kama nke ahụ, anyị na-atụnyere Jizọs na Muhammad, ma ọ bụ Onyenwe anyị nke Bible na Allah nke Koran. Mgbe ahụ, anyị na-ahụ na ha bụ ngụkọta iche ma ọ dịghị ihe na-eme na onye ọ bụla.
Lee /-agụ nakwa:
7 ọdịiche dị n'etiti Jizọs na Muhammad
Tụnyere n'etiti Jizọs na Muhammad nzuko omeiwu
A tụnyere n'etiti Jizọs na Muhammad (Mpụga njikọ)
Strumming na Alakụba 'noses?
Gịnị mere m ihe a? Ọ bụ snap na Alakụba 'noses? Nnọọ bụghị. M ihe a n'ihi Kraịst ga-aghọta ihe ọ bụ n'ezie ihe. Jizọs na Muhammad na-adịghị amasị onye ọ bụla ọzọ. Nwe-ayi, na Allah bụghị yiri. Ọ bụ ihe abụọ dị iche iche iche iche nke chi.
The Muslim anyị kwesịrị n'anya ma na-emeri Jizọs. Jesus bụ nanị olileanya maka mmadụ nile - gụnyere Muslim. Alakụba bụ ndị Chineke hụrụ n'anya nke ukwuu.
Jesus Christ nwụkwara maka Muslim na-azọpụta ha. Mgbe ị ahụ na-enweta Jesus dị ka Onyenwe anyị ga-azọpụta ma azọpụta ma gị na niile gbaghaara mmehie.
N'oge na-adịghị, ọ ga-azọpụta na-azọpụta maka mgbe ebighị ebi.
Ya mere, Islam bụ ize ndụ okpukpe
Akpa, Islam bụ nnọọ ize ndụ okpukpe n'ihi na ọ na gọrọ Jesus. Agọnahụ Jesus na-adịghị azọpụta. Ya mere, anyị ga-agwa enyi anyị na ndị Alakụba banyere Jizọs Kraịst ka ha onwe ha kwa nwere ohere-azọpụta.
Ịgọnahụ Jesus dị ka Otu nwere ike na-eche na otu onye nwere ike a ga-azọpụta ọ bụla ọzọ ụzọ. Na ọtụtụ ndị n'etiti ndị Alakụba na-akụziri ndị mmadụ na onwe ha na ikuku,-enwe olileanya ịbịakwute paradise.
Ma i nwere ike-azọpụta na-azọpụta site na ha onwe ha na-eme, ma ihe ọma ma ọ bụ ihe ọjọọ. Nanị ụzọ na-azọpụta bụ na-anabata Jizọs dị ka Onyenwe anyị.
Ugbu a, mmadụ pụrụ ikwu na Jizọs bụ na kor'an. Unu ga-ghọgburu dị otú ahụ na ihapu otutu okwu. N'ihi na ọ bụghị nke Akwụkwọ Nsọ Jesus. Ndị ọrụ nwere a kpamkpam dị iche iche Jesus ọbụna emegide Bible Jesus.
Ka anyị na-agwa gị banyere Bible Jesus maka mmadụ nile na maka ihe nile ndị enyi anyị ndị Alakụba. Ha ga-nụrụ nke ya, ma ọ bụ ha nwere ike ghara-azọpụta.
Mgbe ahụ ma eleghị anya, ndị ọzọ na-ekwu, ka zere inwe na-ekwu banyere Jizọs, ọ na-eme na Jizọs na-ekpughe onwe nrọ Muslim. Ee, ma ọ bụghị a na-achị na-enweghị isịneke. Nke a bụ dịghị nkwa na Bible na-eme.
Jizọs nyere iwu na anyị kwesịrị ịga na-ekwusa ozi ọma ọ bụla e kere eke. Na nke a bụkwa eziokwu na anyị ga-agwa ndị na ozi ọma banyere Bible Jesus Muslim.
Vecka 25, måndag 17 juni 2019 kl. 01:30